कला/साहित्य/सौन्दर्य खबर – Page4– rastriyakhabar.com
काठमाडौं । सुन्दरतालाई विशेष गरि अनुहारसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । सुन्दर अनुहारले सबैलाई आकर्षित गर्छ । वास्तवमा सुन्दरता अनुहारको रंगमा भन्दा व्यक्तिको सोंचमा लुकेको हुन्छ । तर सुन्दरतालाई अनुहारसंग जोडेर हेरिने प्रचलनले गर्दा धेरै व्यक्तिहरु आफ्नो अनुहारको रंगलाई लिएर चिन्तित..
आइतवार, साउन ५, २०७६ मा प्रकाशित
छाला कालो, खस्रो हुनु विभिन्न किसिमका फोका, दाग, घाउ आउनुलाई छालाको समस्या वा रोग भनिन्छ । छालाको रंग चम्किलो खालको हुन्छ। स्वस्थ छाला र अस्वस्थ छाला राम्ररी चिन्न सकिन्छ । महिलामा छालाको विषेश महत्व हुन्छ । छालाले सुन्दरताले अत्यन्त महत्व राख्दछ । छालाको स्वस्थताले नै सुन्दरताको विशेषता झल्काउँछ ।..
सुन्दर तथा आर्कषक अनुहार कसको राजाईमा नपर्ला र ? बिभिन्न महंगो केमीकल युक्त शौन्दर्य प्रशाधनको प्रयोगले भएको अनुहारको शुन्दरता पनि हराएर झन् समस्या भएको आजभोली धेरैको गुनासो सुनिन्छ। हामी यहाँ यस्तो घरेलु बिधि जसको एक दिन बिराएर लगातार एक महिना सम्मको प्रयोगले अनुहारको दाग धब्बा हटाई चम्कीलो..
अनुहारको दाग हटाई छालामा चमक ल्याउने निकै सरल उपायहरु
तपाइंको छाला धेरैजसो सुख्खा तथा फिक्का देखिने गर्दछ । मरेको छालाको कारणले गर्दा यसो भएको हो छालालाई चम्किलो तथा नरम बनाउनको लागि तपाइंले प्राकृतिक घरेलु उपायलाई अपनाउन सक्नुहुन्छ । यो बिधि धेरै नै सजिलो हुनुका साथै प्रभावकारी छ । सामाग्रीहरु १) कागती २) थोरै नुन ३) चामलको पिठो ४) मह बनाउने..
गर्मीमा फिटनेस राख्ने यी उपाय
काठमाडौं । गर्मीमा फिट रहनु आफैमा चुनौतीपूर्ण हुन्छ । तर, केही बानीमा फेरबदल गरेर आफूलाई फिटनेस राख्न सकिन्छ । जानकारहरूले फिटनेस राख्ने यी उपाय बताएका छन् । बिहान सबेरै उठौं गर्मीमा सबेरै उठेर शारीरिक अभ्यास गर्ने हो भने फिट रहन सकिन्छ । यो मौसममा बिहान ८–९ बजेपछि तापक्रम बढ्न थाल्छ । त्यसकारण..
यी हुन सुन्दरता बिगार्ने ४ बानी
१.तातो पानीले धेरै बेर नुहाउनु तातो पानीले धेरै बेर नुहायो भने छालामा हुने फ्याट्टी एसिड, सेरामाइड्सजस्ता तत्व नष्ट हुन्छ र यसले छालालाई रुखो, सुका र फुस्रो बनाउँछ । त्यसैले तातो पानीले १० अथवा १५ मिनेटभन्दा बढी नुहाउनु हुँदैन । २.सुगन्धित साबुनले नुहाउनु साबुनले मुख धुनाले मुखमा भएको म्वइस्चराइजर..
कागतीको रस, दही र गोलभेँडा : कागतीको रस, दही र गोलभेँडामा रंग बदल्ने गुण हुन्छ । कागतीले अनुहारको दाग हटाउन मद्दत गर्छ । गोलभेँडाले त्वचाको तैलीयपनको कम गर्छ र दहीले त्वचामा पोषण दिनुका साथै नरम बनाउँछ । त्यसैले गोलभेँडाको गुदी एक चम्चा, कागतीको रस एक चम्चा र एक चम्चा दही लिनुहोस् र अनुहारमा..
अनुहारको छाला चम्काउन आलुको रस उत्तम !
गर्मी समयमा अनुहारमा आलुको रस लगाउनाले धेरै फाइदाजनक हुन्छ। यसले अनुहारका बिबिराबाट मुक्ति दिनुका साथै छालालाई गोरो अनि चम्किलो बनाउने काम गर्छ । यसलाई प्रयोग गर्ने विधि पनि एकदमै सजिलो छ । यसका लागि आलुलाई कुटेर त्यसको रस निकालेर अनुहारमा लगाउनुपर्छ । आलुलाई कुटेर त्यसको बाक्लो रसलाई अनुहारमा..
यदि तपाईंको छाला स्वस्थ देखिन्छ भने तपाईंले आफ्नो उमेरलाई निकै सजलोसँग लुकाउन सक्नुहुन्छ । तर तपाईंको छालाबाट चमक गायब हुन्छ भने तपाईं चाँडै नै बुढि देखिन सुरु गर्नुहुन्छ । त्यसकारण तपाईंले आफ्नो छालामा निकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । बजारमा पाइने क्रिमले अनुहारको चमक फिर्ता आउने सोच्नु..
आइतवार, असार १, २०७६ मा प्रकाशित
आकर्षक तथा सुन्दर देखिने इच्छा महिला तथा पुरुष दुबैमा हुन्छ । आर्षक देखिन महिला तथा पुरुष दुबैले अनेक बिधि तथा प्रबिधिको सहायता लिने गर्छन् । अनि यस्ता बिधिहरु प्रायजसो आधुनिक कलामा आधारित हुन्छ र महंगो पनि हुन। यी बिधिहरु अपनाउदा अपनाउँदै पनि महिला तथा पुरुषहरुको आकर्षक देखिने इक्षा भने पुरा हुन..
शुक्रबार, जेष्ठ ३१, २०७६ मा प्रकाशित
छालामा हुने एक प्रकारको तैलिय ग्रन्थीका कारण अनुहारमा डन्डिफोर आउने गर्छ। सामान्यतया छालालाई कोमल राख्नका लागि उक्त ग्रन्थीले चिल्लो पदार्थ पैदा गर्ने गर्छ। युवावस्थामा हर्मोनको गडबडीका कारण उक्त ग्रन्थीमा असन्तुलन आई डन्डिफोरले सताउने गर्छ। महिनावारी अनियमित हुने महिलालाई पनि डन्डिफोरले..
दुई चम्चा जौको धूलोमा कागतीको रस मिसाई पेस्ट बनाएर दाग भएको ठाउँमा लगाउने गर्नुपर्छ । –कागतीको रसमा ब्लिचिङ गुण हुन्छ । यसले कालो धब्बा हटाउन मद्दत गर्छ । यसका लागि कागती काटेर अनुहारमा दल्ने र केही समय त्यसै छोडी मनतातो पानीले धुने गर्नुपर्छ । –दूधमा ल्याक्टिक एसिड पाइन्छ । काँचो दूधमा कपास डुबाई..
अनुहारमा दाग छ ? त्येसो भए जान्नुहोस अनुहारको दाग हटाउने तरिका
गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा बी बी थापाको नयाँ रेकर्ड राख्ने प्रयास
मङ्लबार, जेष्ठ २१, २०७६ मा प्रकाशित
' म तिम्रो सहर छोडी टाढा ' , ' पुरानो डुङ्गा ' जस्ता चर्चित गीतका गीतकार बी.बी थापाले एकैपटक २७ वटा म्युजिक एल्बम सार्वजनिक गरेका छन। होटल अन्नपूर्णमा पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाको उपस्थितीमा २७ ओटा एल्बमको एक सय ४५ ओटा गीत एकैसाथ सार्वजनिक गरिएको हो। गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नयाँ..
अनुहार चाउरी पर्न थाल्यो ? यी फलफूलले बनाउछन् जवान
उमेर बढेसँगै अनुहारको छालापनि चाउरी पर्छ र तन्किन सुरु गर्छ । तर कतिपय उमेर पुगीसकेकाहरुको पनि अनुहार कलिलै र चाउरी रहित हुन्छ । उमेर नपुग्दै छाला चाउरियो भने के गर्ने युवा अवस्थामा नै छाला चाउरी पर्न थाल्यो भने अनावश्यक र महंगो क्रिम र लोसनको सट्टा प्राकृतिक उपाय अपनाउनुपर्छ। यसका लागि फलफुलमा..